njanji 9: Insomniac — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Tive kuwana nayo kuwana nayo
No kuderera isu kweYangon’ hwina
No kuderera isu kweYangon 'kuhwina
No kuderera tinomuziva
ndima 2: (Andy Mineo)
Okay Okay Okay I kundoitora
Chii pfungwa kuridza mutambo kana musingadi kuhwina naro
Handina kumbobvira mate chinonhuwira gumi
Ndinodana kuti chipo saka unoziva Ini gotta nacho
Y'all kurarama akaita maminitsi hadziperi
Kana nguva haisi mari zvino nei tripping kupedza nayo
Pakupedzisira akawana musikana kuti haisi dzake dzorunhare dzose nguva saka unoziva ndaifanira kungorira naro
Oh wangu oh mwari
Izvozvo hazvisi nevakawanda hapana musikana kuti anoyevedza
Ndiri kuedza kurwisa kwemhosva
Y'all kurwisana Wanna mune mhinduro yangu muchikamu
Handizivi kundoitora dawg, kufanana akafa urove vanababa handina zvematongerwo
Vakati ndingada haangatongovi chinhu asi ndinofunga ndichiri zvakazoonekwa zvikuru
Ini haisi kupinda kungotaura I chete kundoitora zvaitwa
Ivo Wanna kuwana basa kana Wanna kuwana pfuti?
Vanoda kuwana kungopotsera uye kuti kupiswa panze akafanana neni muzuva
Wow, Ndinofunga kwatiri
Havarari cheka kuti kushaya hope
Y'all kunetseka Kumbonetswa apo navo rwaJodhani donhwe
Asi iwe hauna kunetseka Kumbonetswa chii muviri wako unoita?
mukristu • Zvita 30, 2014 pa 2:23 pm • pindura
Ungakwanisa kutsanangura shoko shure rwiyo ndapota?
XXX • Kukadzi 9, 2017 pa 4:51 pm • pindura
ա hoah Blog ichi іs anoshamisa ndinoda ST ս kufa poѕts dzenyu.
Garai basa rakanaka! unoziva, peгsons vazhinji kutsvaka аround mashoko ichi, vad ᥙ aigona kubatsira navo ց г ᥱ atly.
fuck • Chikunguru 6, 2017 pa 6:57 ndiri • pindura
Pretty guru romukova. I nyore mahwekwe Blog renyu uye aida kutaura kuti handina chaizvo vhura kumativi enyu Weblog namagwatidziro.
Chero zvazvingava Ndinenge reChibatanwa pamusoro RSS yako
zvokudya uye ndinovimba nemi kunyora zvakare nokukurumidza!